Salon des jeux de société : liana ny ankizy | NewsMada
Salon des jeux de société : liana ny ankizy
Nisokatra ny alatsinainy teo, eny amin’ny Alliance française (AFT) eny Andavamamba ny andiany faha-21 amin’ny « Salon des jeux de société ». Toy ny tamin’ireo andiany teo aloha, raha somary vitsivitsy ny tonga nilalao, ny andro voalohany, efa nihamaro kosa izy ireo omaly, ary ankizy ny ankamaroany.
Tsy natao ho an’ireo efa havanana amin’ny karazan-dalaon-tsaina ihany ny hetsika fa sarihina ho tonga eny sy hianatra koa ireo mbola tsy mahay. Marihina fa maro ny karazan-dalao azo lalaovina eny ary miompana indrindra amin’ny fampianarana ireo tsy mahay sy ny filalaovana ranofotsiny ny amin’ity herinandro ity.
Araka ny fanamarihan-dRazafindrabe Manitra, namorona ity « salon » ity sady mpikarakara, hifindra ao amin’ny efitrano « polyvalent » ny hetsika, manomboka androany hatramin’ny zoma izao, fa tsy ao amin’ny efitrano malalaka na « hall », toy ny mahazatra. Etsy ankilan’izay, hotanterahina amin’iny herinandro ho avy iny ny fifaninanana ankoatra ny amin’ny sokajin-dalao « échec ».
« Hatao ny asabotsy 6 aogositra izao ny fifaninanana amin’ny « échec », satria hotontosaina amin’ny talata ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara amin’ity karazan-dalaon-tsaina ity ary ilaina amin’io ny fitaovana », hoy ny fanazavan-dRazafindrabe Manitra. Tsiahivina fa norombahin’ny Malagasy ny loka tamin’ny fifaninanana iraisam-pirenena, lalao « échec », tamin’iny herinandro iny.
Ankoatra ny « échec », hisy ny fifaninanana ho an’ny lalao « go », « dame », « belote », fanorona, katro, sudoku, « des chiffres et des lettres », « questions pour un champion », « mots croisés », « chiffres croisés ».